Waxaan ka xishooday Addoomadayda Qaar! - Qalinkii Muxammed
Wakhtigii nabi muuse (NNKH) Nolaa ayaa waxaa dhacday, inay u yimaadaan reer aad sabool u ahaa. Waxay ku yidhaahdeen nabi Muuse “nabigii illaahayow waxaad rabigaa noo waydiisaa inuu naga dul qaado faqriga.” Nabi Muuse codsigoodii wuu ka aqbalay, illaahay ayuu u baryay isagoo u waydiinaya inuu rabi ka dul qaado reerkan faqriga iyo dhibaatada.
Illaahay wuxuu ugu Jawaabay “waan aqbalay ducadaas ee laakiin waxaad u sheegtaa inay sanad kali ah aan ka dulqaadayo saboolnimada!” Nabi Muuse sidii ayuu ugu sheegay reerkii. Reerku waxay ka koobnaayeen Nin iyo Xaaskii may fadhiisane way fikireen, Xaaskii ayaa fikrad keentay oo tidhi, hadii illaahay inoo nimceeyay oo uu culayskii inaga dulqaaday, waa inaynu inaguna caawinaa dadka masaakiinta ah.
Ninkeedii wuu ku raacay fikradii, waxay Dhiseen Guri Todoba Albaan le, Todobadaas Albaab waxay ka quudin jireen Dadka socotada ah iyo kuwa baahan oo ay ugu samayn jireen cunto! Waxaa lasoo gaadhay wakhtigii sanadka ahaa ee uu rabi u qabtay. Laakiin reerkii may noqon Sabool ee waxay wali ku jiraan noloshii Ladnayd. Waxaa kasoo wareegay dhawr sano, nabi muuse (NNKH) ayaa arkay kadib reerkii oo wali ah kuwo nimcaysan oo aanuu rabi ka qaadin xoolihii uu siiyay.
Nabi Muuse (NNKH) wuxuu Lahadlay illaahay isagoo le “Rabiyoow waxaad i tidhi sanad kadib dadka waxaan kusoo celinayaa Saboolnimadii illaa iyo hadana waxay yihiin dad ladan ee waa sidee adigaa xumaan ka nasahane?” Rabi Sareeye wuxuu ugu jawaabay “Addoonkaygiiyow waxaan ka xishooday Adoomadayda kuwo kamid ah, inaan ka xidho Albaab raxmadayda ka mida ah oo aan u furay, kadibna Iyagu uga sii dhex fureen Todoba Albaab oo raxmad ah Adoomadayda kale! sidaa darteed ayaan u diiday inaan ka xidho albaabkaas oo ay wali u yiin dad aan sabool ahayn” *
Sheekadan waxay ina tusaysaa, in hadii aynu wax bixino oo aynu gacan furnaano aynaan marnaba khasaarayn, runtii waa arin dhab ah oo hadaad isbarto dabeecada wax bixinta, waxaad bixisay oo laban laab ah ayaa markasta kusoo galaya ee fadlan caawi dadka Liita hadaad awoodo.